Kudya kweAlkaline - Maitiro Ekutevedzera Izvo Kuti Uderedze Kurema ZVINOSHANDA | Kudya kweNutri
Sergio Gallego | | Zvokudya, Chipo chekubhadhara
Nhasi kune zvakawanda zvekudya zvekudzora huremu, zvimwe hazvina hutano uye zvinokuvadza zvachose kune hutano uye zvimwe zvinopesana kukubatsira iwe kurasikirwa uremu nenzira inoshanda uye ine hutano. Panguva ino ini ndichataura newe nezve kudya kwealkaline, iyo inodzivirira kuti mazhinji ezvirwere anoitika nhasi nekuda kwekudya kwakashata uye zvakakwirira acidity iri mumuviri. Nenzira iyi, chirongwa ichi chekudzikisa uremu chinopa zano kudya chikafu chakateedzana chine huwandu hwakawanda hwealkal, iyo inobatsira kudzikisa degree re acidity inogadzirwa nezvimwe zvekudya.
1 Iyo pH nhanho mumuviri
2 Zvokudya zvealkaline
3 Acidic chikafu
4 Zvakanakira chikafu chine alkaline
5 Kukanganisa kwekudya kwealkaline
6 Matipi uye nhungamiro paunotanga iyo alkaline chikafu
7 Zvimwe zvinhu zvinobatsira kuenzanisa pH muropa
Iyo pH nhanho mumuviri
Iyo pH nhanho inoshandiswa kuyera kuti acidic muviri uri sei. Iyo huwandu hwepH iri muropa ingangoita 7,5. Kudya kwakanaka kwakakosha kuve nemhando dzakanaka dzePH uye nekudaro unodzivirira kuoneka kwezvirwere zvakasiyana. Kudya kwealkaline kunotsvaga kuti iyo pH muropa yakakwana uye anovimbisa zvekurema uku, kurapa kwakanaka kwemapfupa uye kudzivirira kwezvirwere zvakasiyana zvinokonzerwa nedigital acidity.
Izvo zvinozivikanwa sekudya kwealkali zviri akapfuma mumaminerari senge sodium, calcium, potasium uye magnesium. Kudya kwealkaline kunotsigira kudya kwakaringana zvichibva pane zvakateedzana zvezvikafu. Nenzira iyi iwe unofanirwa kusanganisa mukudya kwako kwezuva nezuva michero nemiriwo senge broccoli, asparagus, zucchini, tomato kana avocado. Uyewo havagoni kushayikwa nzungu kunge walnuts kana maarumondi uye nyemba senge nhokwe kana nyemba.
Iko kunwa kweacidic chikafu kwakakosha kuti uwane yakanaka pH nhanho muropa. Ivo vakapfuma mumaminerari senge phosphorus, iron neodhini uye inogona kuwanikwa mu Nyama tsvuku, in hove dzegungwa, in dairy products kana mushuga yakanatswa.
Zvakanakira chikafu chine alkaline
Icho chikafu icho inokurudzira kudya zvine hutano zvichibva pazvikafu zvinovaka muviri zvakadai semichero, miriwo kana nzungu. Pamusoro peizvi, inorambidza kunwa kwemafuta, doro kana shuga.
Tevedzera iyi mhando yehuremu hurongwa zvinobatsira munhu kudurura mapaundi ekuwedzera nenzira ine hutano uye inoshanda zvachose. Kune chikamu chayo, kunwa kweacidic uye alkaline chikafu kunobatsirawo kudzikisa huremu nenzira yakati wandei.
Zvimwe zvakanakira chikafu chealkaline ndiyo kudzivirira kwezvirwere zvinogona kuitika seArthritis, inowedzera simba mumuviri kana kubatsira kudzikisa nhanho yekuzvidya mwoyo mumunhu.
Kukanganisa kwekudya kwealkaline
Sezvo nezvekudya kwakawanda, usati watanga kudya kwealkali zvinokurudzirwa kuenda kuna chiremba wezvehutano kwauri kuti uone kana iri regimen iyo yakakodzera kutevedzera kana zviri nani kutanga neimwe mhando yekudya. Chiremba iwe uchafanirwa kuita bvunzo kuti utarise yako ropa pH nhanho uye uzive kana iwe uchida kunwa kweacidic uye alkaline chikafu. Muchiitiko chekuti iwe une chirwere cheshuga, hazvikurudzirwe kutevedzera rudzi urwu rwekudya sezvo rwuchikanganisa zvakanyanya hutano hwako.
Matipi uye nhungamiro paunotanga iyo alkaline chikafu
Avo vanodzivirira chikafu chine alkaline, vanokurudzira kuti iyo pH mwero inoita kuti ndangariro ivandudze zvakanyanya, izvo muviri une simba rakawanda uye kuti iyo kurara mhando kwakakwirira zvakanyanya. Nekudaro, iri mhando yechikafu chausingakwanise kutanga wega nekuti zvinokurudzirwa kutanga waenda kune anoona nezvehutano uyo anozokudzokorora akakuudza kana zvakakodzera kutanga kudya kwakadai.
Tevere ini ndichaenda kukupa iwe muenzaniso wekuti misi yezuva nezuva yealkaline dhayeti inogona kuve yeiko kuti iwe utarise uye iwe unogona kugadzira yako yega menyu.
Panguva yekudya kwemangwanani unogona kusarudza kuva ne muto wakagadzirwa kubva mumiriwo nemichero.
Zvemukati memangwanani iwe unogona kuwana akati wandei magirazi emvura ne chimedu chemuchero.
Panguva yekudya kwemasikati unogona kugadzira ndiro yemashizha emashizha egirini. Unogona kusanganisa ndiro iyi neimwe zviyo kana dzimwe nyemba sezvo zviri nyore kuti iwe utore mapuroteni eanotangira mavhu
Kwechikafu unogona kuwana infusion kana chimedu chemuchero.
Kana zviri zvekudya kwemanheru, zvakanakisa kusarudza yakaderera-koriori uye madhishi akareruka senge miriwo yakakangwa kana oatmeal neimwe michero.
Zvimwe zvinhu zvinobatsira kuenzanisa pH muropa
Kunze kwechikafu chealkaline pane imwe nhevedzano yezvinhu zvinogona kukubatsira kuyera iyo pH muropa uye kudzivirira matambudziko ehutano mune ramangwana
Ita zvishoma zve kurovedza muviri nguva dzose Inobatsira metabolism kuti ishande ichienderera uye nenzira iyi inogona kubvisa tsvina uye muchetura uri mumuviri uye izvo zvinogona kukonzera kuti pH ikwire zvakanyanya.
Izvo zvakakosha kuchenesa muviri nguva nenguva. Kuti uite izvi, pamusoro pemvura yekunwa iwe yaunogadzira diuretic-mhando zvinwiwa izvo zvinobatsira kuchenesa mukati memuviri uye kubvisa chepfu.
Kana iwe uchida kuve neyakaenzana mumuviri zvakakosha kuti iwe uwanewo a kuenzanisa pamanzwiro. Kana iwe uchikwanisa kubatanidza pfungwa nemuviri hauzove nedambudziko reacidity mumuviri izvo zvinogona kukonzera matambudziko mune ramangwana.
Sezvauri kuona, iyo alkaline chikafu haigone kutarisirwa sechishamiso chikafu sezvo iwe usinga tsvage zvakanyanya kuonda kurasikirwa mune ipfupi nguva inogoneka. Uye hazviratidzwe kuti zvine mhedzisiro kune iye munhu anosarudza kuitevera. Chero zvazvingaitika, zvinowanzoitika kana uchitanga kudya kwakati, zvinokurudzirwa kubvunza nyanzvi ichakupa zano kana zvichikosha kuitevera kana kwete.
Ipapo ini ndave kuzokusiira iwe inotsanangurwa vhidhiyo kuti ive yakajeka kwauri chii chinonzi alkaline chikafu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Nutrition » Zvokudya » Kudya kwealkaline
Nzira yekuwedzera sei ferritin zvakasikwa?
Nei dzimwe nguva zvisingaite kubvisa mafuta emudumbu nekumhanya?